होला त जेठ ७ गते अगाडि एमाले-माओवादी एकता ? | Ratopati
होला त जेठ ७ गते अगाडि एमाले-माओवादी एकता ?
काठमाडौं– एमाले र माओवादीबीच बढेको दूरी अचानक कम हुँदै गएको देखिएको छ ।
नाटकीय रूपमा घटनाक्रमहरू विकसित भएनन् भने यसै साता एमाले र माओवादीबीच एकताको कोर्स पूरा हुन सक्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपूर्व नै पार्टी एकताको कोसिस भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत हुँदैछ ।
‘नीति तथा कार्यक्रम अगाडि नै एकताका लागि गृहकार्य भएको छ । छलफल जारी छ र सम्भावना पनि छ ।’ माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले रातोपाटीसँग भने । बाहिर आए जस्तो दुई पार्टीबीचमा विवाद थिएन । पार्टी एकताका लागि हाम्रा सबै तयारी पूरा भएका छन् । यही हप्ता पार्टी एकता हुने सम्भावना धेरै छ, नेता श्रेष्ठले भने ।
दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकीकृत पार्टी बनाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने सहमतिमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
‘यसअघि विवादमा रहेका विषयहरूबारे एमाले र माओवादी शीर्षनेताबीच सहमति भएअनुसार आ–आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक छलफल गराउने र त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर अगाडि बढ्ने तयारी छ ।’ कार्यदलमा बसेर काम गरेका एक नेताले भने । आज साँझ वा भोलि एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने तयारी भएको छ ।
एमालेले एकताका विषयमा छलफल गर्न आज चार बजे नै स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । चार बजे एमाले स्थायी समिति बैठक बालुवाटारमा बस्दैछ ।
मङ्गलबार नै एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता चाँडो गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा दुई नेताबीच भएको छलफलका क्रममा छिटोभन्दा छिटो एकता संयोजन समिति बैठक राखेर रोकिएको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि छलफल भएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका स्वकीय सचिव मोहन गौतमले जानकारी दिएका थिए ।
प्रचण्डले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई र सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग तीन चरणसम्म भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि ओलीले ट्विटरमार्फत प्रचण्डलाई लक्षित गर ट्विट लेखेका थिए । यद्यपि यस्तो भेट भट्टराई र यादवसँग ओलीले पनि गरेका थिए । मङ्गलबार मात्रै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल र प्रेस सेन्टर नेपाल पर्साले मङ्गलबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता श्रेष्ठले फोरमलाई चाँडै सरकारमा सहभागी गराइने जानकारी दिएका थिए ।